WARBIXIN: Barcelona Oo Soo Bandhigtay TODOBA Tartan Oo Lionel Messi Hor Dhigtay Sanadkan Cusub Ee 2018 Iyo Wax Walba Oo Aad Uga Baahan tahay Faah Faahinta Qodobadan. - GOOL24.NET
WARBIXIN: Barcelona Oo Soo Bandhigtay TODOBA Tartan Oo Lionel Messi Hor Dhigtay Sanadkan Cusub Ee 2018 Iyo Wax Walba Oo Aad Uga Baahan tahay Faah Faahinta Qodobadan.
January 3, 2018 Mahamoud Batalaale
Sanad kasta bilawgiisa Barcelona ayaa soo saarta rekoodhe ama qodobada ay xidiga kooxdeeda ee Lionel Messi tartan ku galiso kuwaas oo ay inta badan dhacdo in uu gaadho. Mid ka mid ah waxyaabihii ay Barcelona bilawgii sanadkii 2017 hor dhigtay xidiga kooxdeeda ayaa gaadhay isla dhamaadkii bishii December kaas oo ahaa in uu noqdo xidiga taariikhda heerka kooxeed ee abid goolasah ugu badan ka soo dhaliyay taas oo uu Bernabeu ku soo gaadhay kulankii Real Madrid isaga oo dhaafay halyaygii Bayern Munich ee Muller kaas oo 525 gool soo dhaliyay.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa todobada tartan ee ay Barcelona sheegtay in xidiga kooxdeeda ee Lionel Messi ay horyaalaan sanadkan cusub ee 2018 kuwaas oo iskugu jira kuwo ay tahay in uu shaqsi ahaan u gaadho iyo kuwo ay tahay in uu kooxdiisa la gaadho.
Halkan kaga bogo qodobadan oo faah faahsan iyo sida ay qodobadan qaarka mid ahi u adag yihiin in sah sahlan lagu gaadho:
1-Gaadhista 100-ka Gool Ee Champions League:
Lionel Messi ayaa haddaba ah xidiga abid goolasha ugu badan Barcelona uga soo dhaliyay tartamada yurub wuxuna soo dhaliyay 97 gool oo Champions League ah iyo 3 gool oo UEFA Super Cupka ah isaga oo hal gool u jira in uu gaadho goolasha qarniga tartamada UEFA balse 3 gool ayuu u baahan yahay in uu gaadho 100 ka gool ee UEFA Champions Leaague waana rekoodh uu Cristiano Ronaldo oo kaliyi uga horeeyay. Tartankan ay Barca hor dhigtay xidigeeda ayaan waqti badan ku qaadan doonin.
2- Ku Guulaysiga Koobkii Shanaad ee UEFA Champions League:
Lionel Messi iyo Andrés Iniesta ayay Baracelona sheegtay in ay sanadkan 2018 u tartamayaan si ay ugu guulaystaan koobka Champions League markoodii shanaad waxayna hore ugu soo guulaysteen koobabkii Champions League ee qabsoomay sanadihii 2006 (Paris), 2009 (Rome), 2011 (London) iyo 2015 (Berlin).
Waxayna Barcelona qormadeeda ku sheegtay in haddii ay labadan xidig magaalada Kiev sanadkan ugu guulaystaan koobka Champions League in ay noqon doonaan labadii ciyaartoy ee taariikhda UEFA Champions League ugu horeeyay ee shan koob oo tartankan ah ku guulaysta waxaana rekoodhkan la wadaagi kara Gerard Pique oo mid ka mid ah koobabka Champions League kula soo guulaystay Man United.
3-In Messi Uu Gaadho Guulaha Abid Ugu Badan Ee Uu Ciyaartoy Ka Soo Gaadhay Horyaalka La Liga:
Lionel Messi ayaa haddaba ah xidiga taariikhda horyaalka La Liga goolasha ugu badan ka soo dhaliyay isla markaana goolasha ugu badan ka soo caawiyay laakiin waxa uu taariikhdan ku darsan karaa in uu noqdo xidigii abid kulamada ugu badan soo guulaystay horyaalka La liga.
Lionel messi ayaa Barcelona la soo guulaystay 301 kulan oo horyaalka La Liga ah kadib markii uu ka soo muuqday 399 kulan isaga oo diyaar u ah in uu safto kulankiisii 400 aad ee La Liga laakiin waxaa kulamada guulaha ugu badan Lionel Messi kaga horeeya halyayga Real Madrid ee Iker Casillas kaas oo soo guulaystay 334 kulan taas oo la micno ah in Messi uu u baahan yahay in 33 kulan oo La Liga ah uu sanadkan 2018 la guulaysto Barca si uu rekoodhka Casillas u gaadho.
Messi ayaa rekoodhkan gaadhi kara inta lagu jiro sanadkan 2018 oo ka koobnaan doona qaybta danbe ee xili ciyaareedkan iyo qaybta hore ee xili ciyaareedka soo soca waxayna u muuqataa in kaliya uu waqti ka xigo in uu rekoodhkan kala wareego Casillas.
4- In Min Markii Shanaad Uu Ku Guulaysto Abaal Marinaha Pichichi Iyo Golden Bootka Yurub:
Lionel Messi ayaa noqon kara xidigii ugu horeeyay ee shan jeer ku guulaystay kabta dahabka ah ee yurub wuxuuna sidoo kale markii shanaad ku guulaysan karaa abaal marinta gool dhalinta La Liga ee Pichichi. Messi ayaa afar jeer oo hore ku dhamaystay kaalinta kowaad ee gool dhalinta La Liga oo uu ku soo guulaystay Pichichi laakiin markasta waxa uu soo raacsaday kabta dahabka ah ee gool dhalinta Yurub ee Golden Bootka.
Lionel Messi oo xili ciyaareedkii hore labadan abaal marinood ku soo guulaystay ayaa haddaba 15 gool ku hogaaminaya La Liga kadib markii la soo ciyaaray 17 kulan wuxuuna wali u muuqdaa mid xidigihii gool dhalinta kula tartami jiray ee La Liga ka in badan ka horeeya.
5- In Uu Gool Ka Dhaliyo Chelsea Marka Ay Champpions League Isku Arkaan:
Qodobka shanaad ayaay Barcelona ku sheegtay ee ay tahay in sanadkan 2018 uu Lionel Messi gaadho in uu goolal ka dhaliyo kooxda Chelsea marka ay labada kooxood isku arkaan wareega 16ka kooxood ee Champions League. Messi ayaan wax goolal ah Chelsea ka dhalin 8 kulan oo uu ka hor yimid, waana kooxda kaliya ee kulamo tiradan ah shabaqa ka ilaashatay xidiga ree Argentina.
Lionel Messi ayaa laba fursadood u haysta in uu ka baxo dhibaatadii uu Chelsea kagala soo kulmay in uu goolal ka dhaliyo waana labada kulan ee ay Blues iskaga hor iman doonaan UEFA Champions League.
6-In Uu Noqdo Xidiga Taariikhda Shanta Horyaal Ee Yurub Ugu Waa Wayn Goolasha Ugu Badan Ka Soo Dhaliyay:
Lionel Messi ayaa gaadhi kara ama dhaafi kara rekoodhka uu haysto Jimmy Greaves kaas oo ah xidiga shanta horyaal ee Yurub ugu waa wayn goolasha ugu badan ka soo dhaliyay.Shanta horyaal ee Yurub ugu waa wayn ayaa ah Spain, England, France, Germany iyo Italy, waxaana gool dhalinta horyaaladan ee abid 366 gool ku haysta Jimmy Greaves kaas oo 357 gool horyaalka England ka dhalyay halka 9 gool uu Italy horyaalka Serie A ka dhaliyay.
Laakiin Lionel Messi ayaa horyaalka La Liga ka soo dhaliyay 364 gool wuxuuna u baahan yahay in uu saddex gool oo kaliya ka dhaliyo La Liga si uu u noqdo xidiga rekoodhkan kala wareegi doona Jimmy Greaves, waana waxyaabaha ay Barca ku tartansiisay xidiga ree Argentina.
7- In Lionel Messi Uu Gool Ka Dhaliyo FC Girona Si Rekodhkii Raul U Barbareeyo:
Ugu danbayn Lionel Messi ayaa barbarayn kara halyay kale oo kooxda Real Madrid ah haddii uu kulanka Camp Nou uu wax goolal ah kaga dhaliyo kooxda heeka labaad ka soo baxday ee FC Girona. Lionel Messi ayaa haddaba shabaqa ka soo taabtay 35 kooxood oo uu horyaalka La Liga kaga hor yimid laakiin Rual oo 36 kooxood goolal ka soo dhaliyay ayaa haysta rekoodhka xidiga abid kooxaha ugu badan La liga goolal kaga soo dhaliyay.
Haddii uu Messi kulanka La Liga ee Camp Nou uu Girona shabaqa ka soo taabto waxa uu Rual kala sinaan doonaa in ay min 36 kooxood dhibane kaga soo dhigteen horyaalka La liga.
Si kastaba ha ahaatee, Barcelona ayaan liiskan ku darin in Lionel Messi uu markii lixaad ku guulaysan karo abaal marinta Ballon d’Or oo uu hore rekoodh ugu haystay ka hor intii aanu bishii December aanu Cristiano Ronaldo barbraayn.
MųņąžąŘ ƏĻ Mų§ļįm says:
Jimmy greaves hduu england ksoo dhaliyay 366 alan shearerna 250 goal maxa loodhaha alan shearer aa uugu goolal badan
alan shearer waa eplka
Epl iyo england isu league maaha